Apple TV 4K ပျေါမှာ Apple TV+ show တှကေို Dolby Vision နဲ့ ကွညျ့မရတော့ | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget Apple TV 4K ပျေါမှာ Apple TV+ show တှကေို Dolby Vision နဲ့ ကွညျ့မရတော့
Apple TV 4K ပျေါမှာ Apple TV+ show တှကေို Dolby Vision နဲ့ ကွညျ့မရတော့
Apple TV+ shows တှကေို Apple TV 4K မှာကွညျ့တဲ့အခါ Dolby Vision နဲ့ မပွတော့ဘူးလို့ လူအတျောမြားမြားက ပွောဆိုနကွေပါတယျ။ HDR10 standard နဲ့ပဲမွငျနရေတာပါ။
Dolby Vision နဲ့ ပွသခဲ့ဖူးတဲ့ရှိုးအတျောမြားမြားဟာ ဒီအတိုငျးတှကွေုံ့နရေတာဖွဈတယျလို့ တငျပွမှုတှအေရသိရပါတယျ။
Dolby Vision နဲ့ကွညျ့လို့ရတယျလို့ အဲဒီရှိုးတှကေိုပွောထားတုနျးဖွဈပမေယျ့လညျး Apple TV 4K ကတော့ ရှိုးစခြိနျမှာ HDR10 ကိုပဲအသုံးပွုပါတယျ။ For All Mankind, SEE နဲ့ The Morning Show တို့မှာ ဒီအတိုငျးဖွဈနတောပါ။
Apple Support Communities ထဲမှာ ပွောဆိုနကွေတာတှကေို မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။
SEE ကိုကွညျ့ဖို့အတှကျ ဖှငျ့လိုကျခြိနျမှာ အရငျအပတျတှတေုနျးတော့ Dolby Vision ကို အလိုအလြောကျပွောငျးပေးတယျ။ အခုတော့ HDR နဲ့ပဲပွတော့တယျ။ Apple TV+ က တဈခုခုမှားနတောဖွဈလိမျ့မယျ။ Netflix ကိုကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ Dolby Vision ပွောငျးပေးတယျ။
အဲလိုဖွဈတယျ။ Apple TV+ ရှိုးတှကေို Dolby Vision နဲ့ ကွညျ့လို့ရဖူးပါတယျ။ The morning show, SEE, For all mankind တှလေညျး ရတယျ။ ခုတော့ HDR ပဲရတော့တယျ။ TV, Receiver ဘာဆိုဘာမှ မကလိထားပါဘူး။ Dolby Vision နဲ့ ကွညျလို့မရတော့ဘူးလား။
အတူတူပါပဲ။ အရငျအပတျကထိ Dolby Vision အလုပျလုပျသေးတယျ။ ဒီတပတျကတော့ app အခြို့မှာပဲလုပျတော့တယျ။ အရငျအပိုငျးတှပွေနျကွညျ့တောငျမရတော့ဘူး။
show page တှမှော Dolby Vision logo တှရှေိနတေုနျးပဲဆိုတာ သတိထားမိတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး individual episode တှမှောတော့ HDR ပဲ ပွတယျ။ episode ဖှငျ့ထားခြိနျမှာ Menu နှိပျကွညျ့လိုကျပါ။
Dolby Vision encoding နဲ့ပတျသတျပွီးတော့ အဆငျမပွဖွေဈနကွေတယျလို့ တခြို့ကသုံးသပျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Apple က အဲဒီ protocol ကို ဖွရှေငျးပွီးခြိနျအထိ ပိတျထားတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး Dickinson လိုမြိုးရှိုးတှမှော Dolby Vision ရနတောက ဘာလို့မြားလဲ။
HDR10 လို့ချေါတဲ့ Normal HDR ကတော့ color range နဲ့ black level ကို ခြဲ့ပေးပါတယျ။ Dolby Vision ကတော့ contrast နဲ့ color တှကေို scene-by-scene ခြိနျညှိပေးနိုငျတာပါ။
HDR ကို တီဗှီတှအေတှကျ color gamut တိုးစခွေငျး၊ specific brightness level တိုးစခွေငျးတှေ လုပျဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ မိတျဆကျခဲ့တာပါ။ HDR မတိုငျခငျတုနျးက HDTV တှအေတှကျ Rec. 709 လို့ချေါတဲ့ video specification နဲ့ ကနျ့သတျထားပါတယျ။
ဒီနခေ့တျေရဲ့ LCD နဲ့ OLED တှကေတော့ အရငျကထကျ color မြားမြားစားစားပွသနိုငျပါတယျ။ HDR မလာခငျအထိတော့ သူတို့ရဲ့လုပျဆောငျမှုကို အမွငျ့မားဆုံး မပွသနိုငျခဲ့ပါဘူး။
Dolby Vision ကလညျး scene တဈခုကနေ scene တဈခုပွောငျးတဲ့အခါ metadata ဒါမှမဟုတျ instruction ပွောငျးနိုငျအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ 68 billion color အတှကျ 12-bit color depth ပေးနိုငျပါတယျ။ Dolby Vision ဟာ 4,000 nits နှငျ့အထကျ ရရှိအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။
Dolby Vision ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးအခြို့ကတော့ သီအိုရီသာသာပါပဲ။ လကျရှိ TV set တှဟော full range မလုပျဆောငျနိုငျသေးပါဘူး။
ဒါပမေယျ့လညျး HDR10 နဲ့ Dolby Vision ကတော့ ကှဲကှဲပွားပွား မွငျသာပါတယျ။ brightness level ကှဲတာ ဒါမှမဟုတျ color range မြားတဲ့ ရှိုးတှဆေိုရငျ သိသာပါတယျ။
မကွာခငျမှာ Apple ဆီကသတငျးပွနျရတဲ့အခါ ထပျတငျပေးပါဦးမယျ။
Apple TV+ shows တွေကို Apple TV 4K မှာကြည့်တဲ့အခါ Dolby Vision နဲ့ မပြတော့ဘူးလို့ လူအတော်များများက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ HDR10 standard နဲ့ပဲမြင်နေရတာပါ။
Dolby Vision နဲ့ ပြသခဲ့ဖူးတဲ့ရှိုးအတော်များများဟာ ဒီအတိုင်းတွေ့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ တင်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။
Dolby Vision နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လို့ အဲဒီရှိုးတွေကိုပြောထားတုန်းဖြစ်ပေမယ့်လည်း Apple TV 4K ကတော့ ရှိုးစချိန်မှာ HDR10 ကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်။ For All Mankind, SEE နဲ့ The Morning Show တို့မှာ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာပါ။
Apple Support Communities ထဲမှာ ပြောဆိုနေကြတာတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
SEE ကိုကြည့်ဖို့အတွက် ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ အရင်အပတ်တွေတုန်းတော့ Dolby Vision ကို အလိုအလျောက်ပြောင်းပေးတယ်။ အခုတော့ HDR နဲ့ပဲပြတော့တယ်။ Apple TV+ က တစ်ခုခုမှားနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ Netflix ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Dolby Vision ပြောင်းပေးတယ်။
အဲလိုဖြစ်တယ်။ Apple TV+ ရှိုးတွေကို Dolby Vision နဲ့ ကြည့်လို့ရဖူးပါတယ်။ The morning show, SEE, For all mankind တွေလည်း ရတယ်။ ခုတော့ HDR ပဲရတော့တယ်။ TV, Receiver ဘာဆိုဘာမှ မကလိထားပါဘူး။ Dolby Vision နဲ့ ကြည်လို့မရတော့ဘူးလား။
အတူတူပါပဲ။ အရင်အပတ်ကထိ Dolby Vision အလုပ်လုပ်သေးတယ်။ ဒီတပတ်ကတော့ app အချို့မှာပဲလုပ်တော့တယ်။ အရင်အပိုင်းတွေပြန်ကြည့်တောင်မရတော့ဘူး။
show page တွေမှာ Dolby Vision logo တွေရှိနေတုန်းပဲဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း individual episode တွေမှာတော့ HDR ပဲ ပြတယ်။ episode ဖွင့်ထားချိန်မှာ Menu နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Dolby Vision encoding နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတယ်လ်ို့ တချို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Apple က အဲဒီ protocol ကို ဖြေရှင်းပြီးချိန်အထိ ပိတ်ထားတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Dickinson လိုမျိုးရှိုးတွေမှာ Dolby Vision ရနေတာက ဘာလို့များလဲ။
HDR10 လို့ခေါ်တဲ့ Normal HDR ကတော့ color range နဲ့ black level ကို ချဲ့ပေးပါတယ်။ Dolby Vision ကတော့ contrast နဲ့ color တွေကို scene-by-scene ချိန်ညှိပေးနိုင်တာပါ။
HDR ကို တီဗွီတွေအတွက် color gamut တိုးစေခြင်း၊ specific brightness level တိုးစေခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ HDR မတိုင်ခင်တုန်းက HDTV တွေအတွက် Rec. 709 လို့ခေါ်တဲ့ video specification နဲ့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ LCD နဲ့ OLED တွေကတော့ အရင်ကထက် color များများစားစားပြသနိုင်ပါတယ်။ HDR မလာခင်အထိတော့ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို အမြင့်မားဆုံး မပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Dolby Vision ကလည်း scene တစ်ခုကနေ scene တစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါ metadata ဒါမှမဟုတ် instruction ပြောင်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ 68 billion color အတွက် 12-bit color depth ပေးနိုင်ပါတယ်။ Dolby Vision ဟာ 4,000 nits နှင့်အထက် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Dolby Vision ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကတော့ သီအိုရီသာသာပါပဲ။ လက်ရှိ TV set တွေဟာ full range မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း HDR10 နဲ့ Dolby Vision ကတော့ ကွဲကွဲပြားပြား မြင်သာပါတယ်။ brightness level ကွဲတာ ဒါမှမဟုတ် color range များတဲ့ ရှိုးတွေဆိုရင် သိသာပါတယ်။
မကြာခင်မှာ Apple ဆီကသတင်းပြန်ရတဲ့အခါ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်။
Previous article၂၀၂၁ မှာ port လုံးဝမပါတဲ့ iPhone ထှကျရှိမညျ
Next articleလမျးလြှောကျသူတှအေတှကျ လမျးမီးရှိမရှိပွသပေးမယျ့ Google Maps